London: Dab xoog leh oo xalay burburiyay dhisme ku yaalla Degmada Kensington – Kasmo Newspaper
London: Dab xoog leh oo xalay burburiyay dhisme ku yaalla Degmada Kensington
Updated - June 14, 2017 3:08 pm GMT
London (Kasmo), Dab xooggan ayaa xalay saqdii dhexe ka holcay, isla markaasna khasaare ballaaran gaarsiiyay dhisme dheer oo ku yaalla Degmada Kensington & Chelsea ee galbeedka London
Grenfell Tower, waxaa la dhisay sannadkii 1974kii wuxuuna ka koobnaa 24 dabaq oo 120 guri ah iyo 24 dukaan, waxaana ku noolaa qoysas gaaraya in ka badan 500 oo qofood. Wararka ayaa sheegaya in dabku ka bilowday talaajad ka qaraxday dabaqa 4aad, ka dibna u faafay dusha sare.
Duqa London, saddiq Khan ayaa sheegay in dad badan la la’yahay, Boliiskuna geerida ilaa 12 qof iyo dhaawacyada 74 qof oo 20 ka mid ah xaalkoodu culusyahay, kuwaas oo loo qaybiyay Isbitaallada London qaarkood.
Dadka ayaa arkayay qashin gubtay oo soo daadanaya, muuqaal u eg midkii daarihii New York oo markii dambe isku soo habsaday, laakiin dabka oo ilaa galabnimadii soconayay, xooggiisa waa la baqtiiyay, saacado badan ka dib.
Mid ka mid ah saraakiisha Dabdamiska Woqooyi-Galbeed London oo magaciisa qariyay ayaa sheegay in 32 sano oo shaqadaan uu ku jiray uusan waligiis arag dab la mid ah midkaan oo kale.
Baaxadda dabka ayaa lagu tilmaamay mid an horey loo arag, waxaana ka qaybqaatay 40 gaari iyo 250 Cutubyada dabdamiska ah.
Dadka deegaanka ayaa in muddo ahba ka cabanaya in xaaladda dhismahaasi ahayd mid aad u liidata, dhawaaqa qayladhantuna hooseysay, laakiin la iska dhaga tiray, ha yeeshee Dowladda Hoose ee Kensington & Chelsea ayaa xaqiijinaysa in sannad ka hor lacag gaaraysa £10 malyuun oo Gini lagu dayactiray.
Wargayka ganacsiga guryaha “Inside Housing” ayaa qaba in habkii badbaadada dabka si ku-meelgaar ah looga saaray dhismahaas intii uu socday dayactirka sannadkii 2016kii, waxaana bilowday baaritaan rasmi ah. Laakiin Shirkaddii hawlaha qabatay ayaa ku adkaysanaysa in dayactirka loo fuliyay si waafaqsan shuruucda caafimaadka & badbaadada ee loo yaqaanno “Health & Safety Rules”.
Xukuumadda ayaa markiiba amartay in la hubiyo xaaladda ammaanka dhismayaasha kale ee la midka ah midkaan gubtay oo tiradoodu ku dhowdahay 4,000, waxaana la habeeyay xarumo degdeg ah oo la dajiyo dadkii ku gurya beelay iyo kuwo dadweynuhu iskood u abaabuleen oo wax lagu quudiyo.
R/Wasaare Theresa may ayaa ka tacsiyadeysay dadkii wax ku noqday, Hoggaamiyaha Xisbiga Labourka, Jeremy Corbyn ayaa xukuumadda ku tirtirsiinaya in cashar laga barto dabka.
Corbyn wuxuu xusay dab ka dhacay bishii July, 2009kii, Xaafadda Camberwell oo ay ku geeriyoodeen 3 haween ah iyo 3 carruur ah, kaas oo Warbixintii dib u eegistii xukuumaddu samaysay la is weydiinayo hadda wixii ka qabsoomay iyo talooyin iyo waxtar wixii la siiyay maamullada dhismayaasha dhaadheer leh.